Galkacyo oo loo samaynayo 600 oo ciidan gaar ah oo qaabilsan adkaynta amniga. – Radio Daljir
Galkacyo oo loo samaynayo 600 oo ciidan gaar ah oo qaabilsan adkaynta amniga.
Galkacyo May 27 – Shirwayne wada-tashi kuna saabsan aayaha magaalada Galkacyo ayaa maanta bulshada reer Galkacyo uga furmay hoolka shirarka Dugsiga Sare ee Cumar Samatar kaasoo isla maantaba la soo gaba-gabeeyey, laguna gaaray go’aamo aad muhiim ah.
Shirkaan oo loo bixiyey shirka aayo ka-talinta magaalada Galkacyo ayaa lagu casumay indheergaradka qaybaha kala duwan ee bulshada, sida siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland, madaxda xilligan maamulka heer gobol iyo mid degmo, aqoonyahanno, Issimo, nabaddoonno, ganacsato, haween iyo inta badan madaxda hay’adaha iyo kuwa ururada maxalliga ah ee ka hawlgala gobolka.
Shirkaan maanta oo dulucdiisu ahayd aayo ka-talinta, gaar amniga iyo arrimaha horumarinta magaalada ayaa si wayn looga falanqooday hagar-daamooyinka muuqda iyo kuwa qarsoon ee Galkacyo kala soo darsay xagga nabad-galyada iyo horu-kaca arrimaha bulshada ee dhankasta; waxaana fahan iyo daraasayn xogeed oo la dhuuxay kaddib go’aan lagu gaaray in loo isu-taago maamul iyo dadwaynaba wax-ka-qabashada xaaladda gobolka, gaar ahaan tan magaalada Galkacyo.
Guddoomiyaha gobolka Mudug, ahna Duqa magaalada Galkacyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cuuke oo maamulkiisa xaalad deg deg ah lagu magacaabay dhawaan, ayaa shirwaynaha u soo bandhigay qorshe maamuleed ku aaddan wax-ka-qabashada amniga iyo arrimaha horumarineed ee Galkacyo kaasoo lagu asteeyey muddo lix-bilood gudaheed ah. Waxaa ugu wayn tallaabooyin qorshaysan ee maamulku iftiimiyey samaynta ciidamo isku-dhaf ah oo bilays iyo daraawiish iskuga jira, gaarayana illaa 600 oo askari kaasoo amniga gacan ku dhigi doona.
Maamulku waxay qorshahaan wax looga qabanayo xaaladda gobolka muddada ku siman 6-da bilood ee ay soo bandhigeen u dalbadeen taban-taabin iyo taakulayn xooggan oo ay ka rabaan dhammaan qaybaha bulshada ee magaalada Galkacyo, taas oo ay ugu horrayso in gacan wayn laga siiyo dhinac dhaqaalaha; waxaa sidoo kale Md. Cuuke oo sharraxaad dheeraad ah ka bixiyey qorshaha dhaw iyo midka dheer ee u xarriiqan in maamulkiisu uu ku tallaabsado.
Indheergaradka ka soo qayb galay shirka maanta laguna martiqaaday ayaa isla goobtaasi ka sameeyey ballan-qaado aad u tiro badan oo iskugu jiray dhaqaale iyo gacansiin dhan walba ah; waxaana jiray shaqsiyaad si gaar ah ugu deeqay lacag miisaan leh oo ay uga qayb noqonayaan horumarka amni iyo bulsho ee maamulku iclaamiyeen.
Qaar ka mid ah shirkadaha waawayn ee ka hawl-gala magaalada Galkacyo ayaa iyaguna dhankooda sameeyey ballan-qaado lacageed oo joogto ah, bilkastana lagu taakulayn doono wax ka-qabashada arrimaha magaalada Galkacyo.
Gabagabadii shirka waxaa la magacaabay guddi heer gobol ah, kana kooban 7 xubnood, una xilsaaran aruurinta deeqaha dhaqaale ee ay bulshadu ugu yaboohday gobolka, si wax looga qabto arrimaha qallafsan ee Galkacyo, gaar ahaan amiga.
Cabdifitaax C. Geeddi,